Linux 5.3: izvo zvitsva zveiyo nyowani kernel vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Linux 5.3: izvo zvitsva zveiyo nyowani kernel vhezheni
El nyowani Linux kernel 5.3 iri munzira. Wako wekutanga RC kana kusunungura mukwikwidzi akatangwa. Iyo nyowani RC1 yatove inopa zvimwe zvinoratidza nezve ichave yekupedzisira vhezheni yeLinux 5.3 uye apa tinonyora zvese nhau dzeramangwana kernel izvo zvichakurumidza kusvika kune ese ma distros anoda kuishandisa. Unogona kurodha pasi uye kuyedza iyi vhezheni itsva kubva ku webernuel.org.
ari shanduko mushanduro iyi nyowani dzakakosha, hapana chechipameso. Iyo inouya nekuvandudzwa kukuru kwechikamu chemifananidzo, zvakare kweiyo CPU dhizaini, kugadzirisa mashandiro uye kutsigirwa kwetekinoroji nyowani senge Intel Speed ​​Sarudza Tekinoroji kana SST yeIntel processor inogadzirirwa maseva, ichibvumira zvirinani kumisikidzwa kweiyo frequency / kushandiswa kwemitoro yakasiyana yebasa. Izvo zvinosanganisirawo rutsigiro rweApple MacBook malaptop.
Pakati pe Chii Chitsva uye Chitsva muLinux 5.3 iwe uchawana:
Tsigiro yezvitsva AMD Radeon RX5700 Series mune iyo AMDGPU mutyairi. NAVI ikozvino inotsigirwa uye ichaenderera nekuvandudza zvimwe zvisipo zvebugs uye optimizations.
Iyo Nouveau mutyairi weNVIDIA GPUs yakagadziridzwawo kuwedzera rutsigiro rwe Kuedza TU116.
Intel HDR ichatsigirwawo, sekuda Broadcom V3D kubva kuRaspberry Pi 4, uye dzimwe shanduko dzemamwe magrafiki machipisi.
Intel Speed ​​Sarudza Technology kana SST inozotsigirwawo Intel Xeon Cascadelake.
ARM inovandudza rutsigiro kutsigira mamwe maSoC nemabhodhi, senge NVIDIA Jetson Nano.
RISC-V zvakare inovandudza kernel kodhi nerutsigiro rweiyi yakavhurika ISA.
Svikawo kugadzirisa kweAVX-512, CPUfreq mutyairi weRaspberry Pi, rutsigiro rweIntel's NNPI, UMWAIT, rutsigiro rweX86-based Chinese Zhaoxi CPUs, zvigadziriso zve64-bit ARM, nezvimwe.
Nhau uye kugadzirisa mukutsigirwa kweye nyowani yekumanikidza masystem uye mafaera masisitimu kana FS. Semuenzaniso UBIFS, NFS, VirtIO-PMEM, Ceph, Btrfs uye XFS, F2FS nerutsigiro rwemuno rweSAPAP, LZ4 compression yeEROFS, maficha matsva muExpT4, nezvimwe.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwemamwe malaptop, kunyanya mhando nyowani Apple MacBook yakaburitswa mushure megore ra 2015. Zve ASUS TUF Kubheja uye maChannelbook.
Support for itsva Hardware senge mapiritsi eWacom, Sitek racing vhiri, uye zvimwe zvigadzirwa Zvakare ye100GbE network, Intel Sound Open Firmware, Cirrus Logic, Realtek odhiyo, nezvimwe.
Uye chekupedzisira, chiripo dzimwe shanduko sekutsigira ACRN hypervisor, gonesa Wimplicit-falltrhough compiler mureza wevagadziri, ARM Energy Aware Kuronga, mutyairi weVirtIO-IOMMU, rutsigiro rwekuomesa firmware uye mafaera emicrocode, rutsigiro rweXxHash, vagadziri veCERN vanga vachibvisa sisitimu yeFMC, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 5.3: izvo zvitsva zveiyo nyowani kernel vhezheni
Pindura kuna joro
Leela Chess Zero, yakangwara yakavhurwa sosi chess injini
Yakaburitsa vhezheni itsva yeApache NetBeans 11.1